Duufaano Baraf ah oo markale saameeyey Maraykanka - Wargane News
Home Somali News Duufaano Baraf ah oo markale saameeyey Maraykanka
Qeybo kamid ah Bariga dalka Maraykanka ayaa looga dhawaaqay xaalad deg deg ah kadib markii ay halkaasi ku habsadeen duufaano baraf wata oo todobaadkii labaad ka da’aya bariga wadankaasi.
Magaalooyinka Boston iyo New York ayaa kamid ah goobaha uu barafka sida weyn ay u saameeyeen todobaadyadii lasoo dhaafay.
Duulimaadyada ka baxa Airporada waaweyn ee ku yaal magaalooyinkaasi ayaa qaarkood la hakiyey, shalay oo Isniin ahayad ayaa 1700 duulimaad dib loo dhigay, xaalada cimilada awgeed. Sidoo kale inta badan iskuulada ayaa shalay iyo maanta oo Salaasa ah xiran.
Maanta oo Salaasa ah ayaa lagu wadaa in baraf horleh uu ka da’o nawaaxiga magaalada Boston oo uu horey u yaalay barafkii ku da’ay duufaanihii hore ee todobaadyadii lasoo dhaafay, arrintaasi oo ay walaac weyn ka muujiyeen maamulka Boston.
NEC Officials Embark on Working tour covering all Regions of the Country
Somaliland: Badhasaabka Saaxil oo ka Hadlay Qoxoonti ka Yimid Yemen oo Laga Celiyay Berbera
Trump: Flynn tillaabadii uu qaaday waxay ahayd mid sharci ah’
Somaliland: Kulmiye top brass woo Professor Samatar to join ranks
Brazil: Shacabka oo codsaday in xilka laga qaado Madaxweyne Dilma Rousseff
Somaliland: Wadamada Somaliland Ka Tageera Doorashooyinka Oo Shir Deg Deg Ah Ka Yeelanaaya Go’aankii Madaxweyne Siilaanyo Dib Ugu Dhigay Doorashadii Wakiilada.